Dharka Dutchka, waa sax | Safarka Absolut
Holland waa mid ka mid ah dalalka taariikh ahaan iyo dhaqan ahaanba noo siiya wax weyn dhinacyada dhaqanka iyo xiisaha leh oo ku saabsan xiisaha xiisaha marwalba loo kiciyo. Nederland ma laha dhar dhaqameed qaran, in kasta oo ay na siiso a isku dhafan oo dhar kala duwan ah ku jira gobollada kala duwan ee Nederland
Kuwa ugu caansan waxaa loo yaqaan suud "Ii shid" oo ka kooban goono madow, khafiif khafiif ah, shaal iyo koofiyad xarig ah, oo ay weheliyaan qaar Kabaha alwaaxa (Klompen) waa waxa dadka badankiisu aaminsan yihiin ama tixgeliyaan inay yihiin dharka hiddaha ee Holland iyo dalal kale.
1 Qeybaha dharka Dutch ee caadiga ah
2 Kraplaps: sida loo sameeyay
3 Goorma ayaa goonnada loo rogaa
4 Kabaha dharkaan dhaqameed
Qeybaha dharka Dutch ee caadiga ah
Maxay tahay sababta loo yaqaan "Volendam" dacwada si fiican loo yaqaan? Dad badan ayaa ka fikiraya dharka Volendam markay ka fikiraan Holland ama Netherlands. Kani waa dharka lagu soo koobi karo dhammaan noocyada sumadaha ee hoosta 'Dutch Maid', oo leh daboolka iyo baalasha ugu sarreeya. Xaqiiqdii, suudka ayaa kaliya lagu xiraa magaalada of Volendam, mana ahan mid wakiil ama astaan ​​u ah guud ahaan Nederland, hase yeeshe aad ayey caan u tahay.
Waxaa jira saddex nooc oo dacwadda ka mid ah, sidaa darteed waxaa laga yaabaa inaad isweydiisay sababta aad ugu aragto sawirro kala duwan oo aysan isku muuqaal ahayn. Maaha mid ku habboon maalin kasta, mana loo doorto in la aado suuqa maalin Axad ah, laakiin waa ku habboon munaasabadaha gaarka ah, oo ah ta ugu badan ee maalmahan la arko.
Waxaa jira a nooca suudka loo yaqaan 'Bruiloftsgast'ama' arooska martida '. Waa waxa loo yaqaan shaati, oo aan lahayn gacmo iyo goonno. Dharka dhaqameedku waa qiyaastii dhererka canqowga. Kaamirada lama soo bandhigo marka suudku dhammaado. Dusha sare ee camisole a 'kraplap', sidoo kale loo yaqaan'kooblab''kralapamakroplap', Nooc laba jibbaar ah, oo la mid ah siyaada sidoo kale laga helo dharka Jarmalka qaarkood. Waxay ku dhegsan tahay qoorta waxaana lagu xirayaa sagxad hoose iyadoo ay ku dhejisan tahay xargaha qaybta hore oo leh dunta iyada oo loo marayo siddooyin ku dheggan qaybta dambe.
Kraplaps: sida loo sameeyay
El kraplap laga helay dhar badan oo holch ah, maaddaama badanaa loo qurxiyo hab aad u guuleysta, maaddaama lagu dhejin karo ama lagu daabacay dhar daabacan oo leh qurxiyo kala duwan. Waxay ka kooban yihiin laba qaybood, hore iyo gadaal, hal garab ayaa la tolay, midka kalena wuxuu leeyahay hagaajin. Furitaanka qoorta waxaa ku yaal gabal ama xarig. Maalmahan, kraplap badiyaa wuxuu leeyahay naqshad ubax mashiinka tolida ee mashiinka tolidda, badanaa ubax.
Qiyaastii 1930-kii, qoys loo bixiyay Tol ayaa soo saaray qaab farsamo buufin rinjiyeynta nashqadaha Rose ee asalka xariir iyadoo la isticmaalayo taxane ah stencil; Tani waxay umuuqataa inay hordhac u tahay mashiinka daabacan ee maanta loo isticmaalay soosaaraan kraplaps.
Goorma ayaa goonnada loo rogaa
Goonnada ayaa markaa la xidhayaa, goonnada xargaha cad iyo casaanka ah suudka loo yaqaan 'martida arooska', haddii kale goon dheer oo midab madow oo adag leh, badiyaa madow ama buluug buluug ah.
Haweenka ku jira Marken, dhowr kiiloomitir meel u jirta Volendam, waxay xirtaan goonno xargo aad u eg, laakiin had iyo jeer ka hooseeya la dusha sare. Dusha sare ee goonadan, waxa loo yaqaan 'kletje' ayaa xidhan, buste dhogor madow ah ama jaakad xagga dambe ah, iyo dhego dhegyo ballaadhan oo xagga hore ah. Waxay ka kooban tahay silsilad laba jibbaaran oo hore iyo gadaal ah, oo lagu xoojiyay taam ahaanta; qaybta hore waxay ku xidhantahay qabatooyin.
Kabaha dharkaan dhaqameed
Klompen, ama kabo alwaax ah, waa dhaqan caan ah oo reer Nederland ah, sida tulips iyo dabaysha. Kabaha ugu da'da weyn alwaaxda abid laga helo ayaa laga helay magaalada Amsterdam sanadkii 1979 waxayna taariikhdu ahayd ilaa 1230 miilaadiga kabaha ayaa ahaa kuwo qaali ah oo ay xirtaan kaliya dadka maalqabeenada ah si ay cagtooda u ilaashadaan una muujiyaan inay awoodaan raaxada noocaas ah, sidaa darteed ayaa kacay Klompen, Kabo alwaax ah oo ka qiimo jaban, beddel bedqabka kabaha maqaarka ee gacanta lagu tolay.
Noocyadii ugu horreeyay ee kabo alwaax ah ayaa lagu soo bandhigay qoryaha keliga ah iyo daboolka maqaarka, si kastaba ha noqotee, ugu dambeyntii kabaha oo dhan waxaa laga sameeyay alwaax si si fiican loo ilaaliyo cagaha, maaddaama dad badan oo xirnaa ay ahaayeen kalluumeysato, beeraley iyo shaqaalaha warshad tan iyo markii ay bixiyaan caqabad ka dhan ah khataraha sida qabatooyin kalluumeysi, ciddiyo iyo waxyaabo kale oo fiiqan walxaha. Looma isticmaali karo inay aadaan kaniisada ama guriga gudihiisa, laakiin waxaa loo isticmaali karaa inay ka qeyb galaan qoob ka ciyaarka qaarkood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Dharka Dutch, waa sax
Ku jawaab dayan
hahahajajjjajjajjajajajaja hahaha waxa aabe thisoo ha aaminin oooooo waligood sidan ma helin
Ku jawaab monserrat
oooogan waxaan ahay josti n biber walaashiis aad baan caan u ahay hahaha in aabe yahay jostin biber walaashiis yyy you nononon hahahahahaha adiga nonononononono hahahaha
dhammaantood way wanaagsan yihiin, ha ka wada hadlin waddamada oo dhan way fiican yihiin, hana ka wada hadlin, u aad nabad tag, nabad badan
Ku jawaab monserrath
Waan jeclahay fikradahaaga
Maxay dad badani uga hadlaan si fool xun dhaqan aan iyagu aqoon
dharka hurdada ee juan dijo
wax iima tarayso maxaa yeelay magacaas ma sheegayo
Jawaab jujaanka juan
Laakiin waan sugayaa oo waxaan iibsanayaa dharka jiifka ee Juan maxaa yeelay aad bay u kululaan yihiin waxaan rajaynayaa oo aan iibsan doonaa, waxaa lagu iibiyaa Uruguay, internetka ka gal oo fiiri bye!
Aad u xun waxaa jira faallooyin gaar ah. Waxaan u maleynayaa inay tahay wax aad u kooban, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ay weli u isticmaalaan dharka caadiga ah aroosyada ama xafladaha.
mujica caadi dijo
wax walba oo aad u fiican oo ku saabsan Holland, waan jeclaaday. dhaqankooda oo dhan iyo nacasnimadooda, waxaan rajeynayaa inay yihiin kuwo naxariis badan marka la booqdo mana necbaan shisheeyaha, midabkooda ama asalkooda dartiis ...
Jawaab norma mujica